CECAFA CUP: Soomaaliya oo barbardhac la gashay Eritrea - BBC News Somali
CECAFA CUP: Soomaaliya oo barbardhac la gashay Eritrea
Lahaanshaha sawirka CECAFA
Xulka Qaranka Soomaliya ayaa ciyaartii galabt barbardhac (0-0) la galay xulka Eritrea.
Soomaliya waxay halkas ka soo heshay hal dhibic. Eritrea ayaa dhankeeda difaacaneysay kaalinta labaad ee group-ka ay ku wada jiran ee A.
Kooxdaas waxaa hoggaamineysa Uganda oo haysta 9 dhibcood, waxaana ku xigta, Eritrea oo leh 7 dhibcood, halka Soomaaliyana ay haysto 5 dhibcood.
Waxaa suuragal ah in kaalintaas ay Soomaaliya u saamaxdo in ay isreeb-reeb kale ciyaarto, waana haddii Jabuuti laga badiyo ciyarta ay galabta la yeelaneyso Uganda.
Xulka Jabuuti haddii ay ku badiyaan goolal badan, waxay xitaa meesha kala bixi karaan Eritrea oo markaas hoos ugu soo dhici karta in kaalinta u baahan isreeb-reebka kale iay soo gasho.
Tartanka koobkan Afrika ee CECAFA, intii uu socday waxay Soomaaliya soo bandhigtay ciyaaro kuwo aad u wanaagsan.
Seddaxdii kalun ee ugu dambeeyay mid ka mid ah ayaa Soomaaliya laga badiyay, Uganda ayaana ku garaacday 2-0.
Kullankii ugu horreeyay waxay xulka Soomaaliya la dheeleen Jabuuti oo barbardhac ay la galeen, Maantana barbardhac kale ayey Eritrea la galeen, waxayna ka soo badiyeen xulka Burundi oo 1-0 ay ugu durduriyeen.
Group-ka B oo ah kooxda labaad waxaa hoggaamineysa Kenya oo haysta 9 dhibcood, halka Tanzania oo ku xigta ay haysato 4 dhibcood, waxaana soo raacda Sudan oo leh 2 dhibcood, taas oo ay u aadi doonto kullan kale oo isreeb-reeb ah.
CECAFA waa mid ka mid ah tartamada ugu faca wayn qaaradda Afrika, koobabka ugu badan waxaa qaadatay Uganda oo haysta 14 koob.
Kooxda hadda difaacaneysana waa Kenya oo horey ugu guuleysatay 7 koob oo horyaalkan ah. Waxaa ka qeybgala tartanka dalalka Bariga iyo Bartamaha Afrika.
Ciyaaro caalami ah oo lagu "qaban doono" Soomaaliya
Dalalka qaar ayaan ka qeybgaleynin Sannadka. South Sudan iyo DR Congo ayaa isaga haray seddax maalmood ka hor inta uusan furmin.
Image caption Xulka dalka DR Congo oo la filayay in tartanka ay ka qeybgalaan ayaa ka baxay seddax maalmood ka hor intaan la billaabin
Go'aankooda dalakaas wuxuu daba socday midkii Itoobiya ay ku go'aansatay in xulkeeda aysan ka qeybgaleynin Tartankan CECAFA ee 2019.
Tartanka oo aalaaba ay ka qeybgalaan 12 kooxood, sannadkan sagaal oo keli ah ayaa qeyb ka ah. Waxayna dalalkaas ku hareen in ay fulin waayeen qaar ka mid ah shuruudaha uu Xiriirka qabanqaabiya CECAFA ku xiray ka qeybgalka.
Sannadkii la soo dhaafay ayaa la baajiyay koobka CECAFA ka dib markii la waayay dal martigeliya. Sannadkanna 2019 waxaa martigelineysa Uganda.
21 Abriil 2018